u-Goodall uhlanganise umjaho oyirekhodi njengoba i-SA ithuse i-India ukuqoba i-series
eLucknow: u-50 ka-Lara Goodall usize ama-Momentum Proteas ukunqoba umjaho wabo wesithathu omkhulu kwi-One-Day International njengoba bahlule i-India Women ngezinti eziyisikhombisa ukuba ngaphambili ngo-3-1 e-Ekana Cricket Stadium e-Lucknow ngeSonto.
Bahlele u-267, kushaya oseformini u-Lizelle Lee oshaye u-69 (75 balls, 10 fours), ukapteni wesikhashana u-Laura Wolvaardt oshaye u-53 (78 balls, 6 fours), i-Player of the Match u-Mignon du Preez ohlasele ngo-61 emabholeni awu-55 (8 fours, 1 six) kanye no-59 emabholeni awu-66 (5 fours) ka-Goodall njengoba i-South Africa inqobe kusele amabhola ayisishagalombili.
Umjaho wabo uhlule umphumela odlule omkhulu u-265 bedlala ne-England e-Centurion ngo-2015/16 futhi kwaba ukunqoba kwabo i-series okwesithathu kulandelana emuva kokuthi bahlule i-New Zealand (2020) ne-Pakistan (2021) kuma-series abo amabili ama-ODI adlule.
Phakathi kwalokho, abadlali baka-Hilton Moreeng bafika kwi-semi-final ye-T20 World Cup e-Australia ngonyaka odlule, okukhombise ukuthi iqembu lenza inzuzo enkulu kumdlalo wezwe.
Bachaza kwimidlalo embili abayinqoba kuhambo labo e-India, kudlalelwa kwi-bio-secure environment (BSE) e-Lucknow, umphumela odlule usho ukuthi sebenqobe i-series kusele umdlalo owodwa.
Kodwa bazoya kumdlalo wokugcina ngoLwesithathu begcwele ukuzithemba kulandela ukunqoba ngeSonto, okuhlanganiswe abashayayo.
Abashwibayo bebephisane ngo-266/4 emuva kokuthi u-Wolvaardt, ukapteni obambile njengoba engekho u-Sune Luus olimele, wanqoba i-toss wakhetha ukushaya kuqala.
i-innings yeqembu lasekhaya ibiyakhwe ikhulu lesithathu lika-Punam Raut kumsebenzi wakhe emuva kokuthi ashaye ama-runs amaningi engakhishwanga u-104 (123 balls, 10 fours).
u-Harmanpreet Kaur ushaye u-54 off 35 balls (7 fours, 1 six), babakhona nabanye abadlale indima njengokapteni u-Mithali Raj (45) no-Priya Punia (32).
Kuma-South Africans, u-Nondumiso Shangase (1/41) uyena odlale kahle, kanye no-Ayabonga Khaka (0/26). u-Shabnim Ismail (1/50) naye ukhiphe inti, kwathi othole impumelelo kube u-Tumi Sekhukhune othole u-2/63.
Bebhekene nomphumela omkhulu, ama-Proteas aqale umjaho ngenhlanganiso encomekayo phakathi ka-Lee-Wolvaardt yama-runs awu-116. Bobabili bacacise ngenhloso kwasekuqaleni beshaya u-79 kuma-overs okuqala awu-15 futhi lokho kuvumele iqemb labo lizithole ngaphambili kumjaho.
Emuva kokuthi bobabili baphume ngokulandelana, kuqhubeke u-Du Preez no-Goodall. Bobabili banezezele u-103 ngenti yesithathu ukukhathaza abashwibi be-India futhi baqhubeka nomdlandla uhambelane nezivakashi.
u-Du Preez ukhishwe eno-31, kodwa u-Marizanne Kapp ungene washaya u-22 emabholeni awu-18 ukusiza u-Goodall aqede umsebenzi.
Ukubuya kwa-Kapp no-Chetty kuqinisa ama-Proteas u-Lee no-Luus bashaye ama-Proteas anqoba ngerekhodi